Entertainment : Myanmar News Hub
KNDO လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှုဖြစ်ရပ် ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်
Posted by mmnewshub on May 20, 2013 · LeaveaComment BBC News, 19May 2013 —- လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၀ နီးပါးက ဖြစ်ပျက် ခဲ့တဲ့ KNDO ကရင် သူပုန်တွေရဲ့ လေယာဉ် ပြန်ပေး ဆွဲမှု ဖြစ်ရပ် ဇာတ်လမ်းကို ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူး တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Category Entertainment, Selected News · Tags တောင်ကြီးမြို့တွင် မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် အတွက် မဏ္ဍပ်များ စတင် ပြင်ဆင်
Posted by mmnewshub on April 10, 2013 · 11 Comments Popular News Journal, 10April 2013 —- တောင်ကြီး-ဧပြီ၁၀ တောင်ကြီးမြို့တွင် မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် အတွက် မဏ္ဍပ်များ စတင် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။
Category Entertainment, Selected News · Tags သီချင်းတွေနဲ့မြူးမယ့်သင်္ကြန်
Posted by mmnewshub on April 10, 2013 ·9Comments 7Day News Journal, 10April 2013 —- မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း ကျရောက်တော့မယ့် နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ကာလကို ကြိုတင်ရင်ခုန်နေကြသူများထဲမှာ သာမန်ပြည်သူများသာမက အနုပညာရှင်များ၊ အဆိုတော်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ရင်ခုန်တဲ့သင်္ကြန်ကို ဘယ်လိုနွှဲမလဲဆိုတဲ့ စကားသံလေးတွေ နားထောင်ကြည့်ရအောင်။
Category Entertainment, Selected News · Tags နယူးယောက် အမျိုးသမီးပွဲ မြန်မာ Me N Ma အဖွဲ့ ဖျော်ဖြေမည်
Posted by mmnewshub on April 5, 2013 · LeaveaComment VOA News, 4April 2013 —– မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်အမျိုးသမီးတေးသံရှင် ၅ ဦးရဲ့ Me N Ma အဖွဲ့ဟာ နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ လေးကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာပေါ်က အမျိုးသမီးများရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင် ဖျော်ဖြေဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဧပြီလ ၄ ရက်နဲ့ ၅ ရက်နေ့တွေမှာပြုလုပ်တဲ့ ဒီအမျိုးသမီးများရဲ့ အခမ်းအနားကို နံမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေ အပါအ၀င် ကမ္ဘာကျော် လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများအပြား တက်ရောက်နေတာ ဖြစ်သလို ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့အတွက် Me N Ma အဖွဲ့က အထူးဂုဏ်ယူတယ်လို့ ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးက အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အခုလိုပွဲမျိုးမှာ သူတို့အဖွဲ့ ဖျော်ဖြေဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပုံကို [...]
Category Entertainment, Selected News · Tags တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်သီဆိုမည့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးနှင့် ပတ်သက်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်
Posted by mmnewshub on January 28, 2013 · LeaveaComment Arakan Times, 28 January 2013 —- ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်၊ နေ့လည် ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်မည့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ မင်းလမ်းရှိ ရခိုင်အမျိုးသား ကွန်ယက်ရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Category Entertainment, Selected News · Tags ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲ
Posted by mmnewshub on January 13, 2013 · 1 Comment BBC News, 12 January 2013 —- မြန်မာ နိုင်ငံကို မကြာသေးခင်က ပြန်လည် ရောက်ရှိလာတဲ့ အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေးဟာ သူ့ရဲ့ တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲကို ပြည်သူ့ ရင်ပြင်မှာ စနေနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
Category Entertainment, Selected News · Tags အော်စကာ ဆန်ကာတင် စာရင်း ကြေညာ
Posted by mmnewshub on January 11, 2013 · LeaveaComment BBC News, 10 January 2013 — ၈၅ ကြိမ်မြောက် အော်စကာ ဆု ဆန်ကာတင် စာရင်းတွေ ကို မှာ ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ အမေရိကန် ပြည်တွင်းစစ်ခေတ်က လုပ်ကြံ ခံရတဲ့ သမ္မတဟောင်း အေဘရာဟမ် လင်ကွန်း အကြောင်း ရိုက်ကူးတဲ့ စတီဗင် စပီးလ်ဘတ်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ သမိုင်းကား က အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု အပါအဝင် ၁၂ ဆု ဆန်ကာတင် စာရင်း ဝင်သွားပါတယ်။
Category Entertainment, Selected News · Tags နယ်ကျောင်းဆရာတို့၏ ဘ၀ အခြေအနေကို ရိုက်ကူးထားသည့် ထာဝရအလင်းတန်း ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ၈ ခု ဆွတ်ခူး
Posted by mmnewshub on December 30, 2012 · LeaveaComment ပါမောက္ခပညာရေးမဂ္ဂဇင်း . ၃၀ရက်နေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ —– ကျောင်းဆရာများရဲ့ ဘ၀အခြေအနေနဲ့ အလုပ်အကိုင်အကြောင်း၊ နယ်မြှို၊ ကျေးလက်ဒေသတွေက လူထုနဲ့ ကလေးများရဲ့ ပညာရေးအခြေအနေ၊ ခေတ်နောက်ကျနေဆဲ အမြင်သဘောထားစတဲ့ အကြောင်းအရာများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ “ထာဝရ အလင်းတန်းများ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ 2011 ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီ ၈ ခု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Category Entertainment, Selected News · Tags ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ မြင်ကွင်းများ
Posted by mmnewshub on December 30, 2012 · LeaveaComment မြန်မာ့သတင်းမီဒီယာများ . ၃၀ရက်နေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ —- ယနေ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ရက်နေ့တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့သုဝဏ္ဏအားကစားရုံတွင်ကျင်းပရာ ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာများမှ အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Category Entertainment, Selected News · Tags ‘ထာဝရအလင်းတန်း’ ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ၈ ဆုရ
Posted by mmnewshub on December 30, 2012 · LeaveaComment VOA News, 30 December 2012 —- လောလောလတ်လတ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွက် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ပေးပွဲမှာတော့ တနှစ်လုံး အတွက် မြန်မာရုပ်ရှင်ကားကြီး ၁၅ ကား ရှိတဲ့ အထဲကနေ အကယ်ဒမီ ဆုတွေ ရွေးချယ် ပေးအပ်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီအခြေအနေမှာ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် အဆင့်အတန်း၊ အခြေအနေနဲ့ အကယ်ဒမီ ဆုရွေးချယ်မှုကရော လွတ်လပ်မှု ရှိခဲ့ပါသလား ဆိုတာကို မသိင်္ဂီထိုက်က စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
Category Entertainment, Selected News · Tags 1234» Recent Posts	၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုနဲ့အလွန် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး